महिला र पुरुषको सर्टमा टाँक ठिक विपरीत किन हुन्छ ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | १ फाल्गुन २०७२, शनिबार ०३:३८ |
एजेन्सी । तपाईले कहिल्यै यो कुरामा ध्यान दिनु भएको छ कि महिला र पुरुषको सर्टमा टाँक अर्थात बटन अलगअलग साइडमा किन हुन्छ ? सामान्यतः महिलाको सर्टको टाँक बायाँतर्फ हुन्छ, जबकि पुरुषको सर्टमा दायाँतर्फ । तर, यसो किन ?
हाम्रो सर्टमा रहेको टाँकको कयौ सिद्धान्त छ, पछिल्ला कयौ सताब्दीको परम्पराअनुसार यसमा अनेक तर्क दिइएको छ। एउटा भनाइ अनुसार पहिला पुरुषहरु आफ्नो कपडा स्वयम आफै लगाउथे भने महिलाहरुलाई अरुले कपडा लगाइदिने गर्दछ । र, अधिकांश मानिस दाहिने हातले काम गर्दथे । यही कारणबाट पुरुषको सर्टमा दायाँतर्फ टाँक लागेको हुन्छ जबकि महिलाहरुको कपडामा बायाँतर्फ टाँक हुन्थ्यो । किनभने उनीहरुलाई अरु महिलाले कपडा लगाइदिन्थे ।
यस्तै अर्को भनाइ पनि छ । यो भनाइअनुसार पहिला पुरुष दायाँ हातमा तरबार राख्दथे, जबकि महिलाहरु आफ्नो बायाँ हातले बच्चा समाउँथे । पुरुषलाई टाँक बन्द गर्न र खोल्नका लागि बायाँ हातको सहयोग लिनु पर्दथ्यो । त्यसैले पुरुषको सर्टमा दायाँतर्फ टाँक हुन्थ्यो । तर, महिलाहरुका साथ ठिक विपरीत हुन्थ्यो त्यसैले महिलाहरुको कपडामा बायाँतर्फ टाँक हुन्छ ।
पहिला पहिला महिला र पुरुषको पहिरनमा अनेकन भिन्नताहरु हुने गर्दथ्यो । तर समय बित्दै जाँदा महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएपछि उनीहरुको कपडा पनि करिबकरिब एकैजस्तो हुन लाग्यो । त्यसैले महिला र पुरुषको कपडामा केही अन्तर देखाउन पनि यस्तो गरिएको हो ।
यस्तो यसको सम्बन्ध नेपोलियन बोनापार्टसँग पनि छ । भनिन्छ कि नेपोलियनले महिलाहरुको कपडामा बायाँ टाँक लगाउन आदेश दिएका थिए । किनभने नेपोलियन सधैजसो एउटा हात सर्टमा हालेर उभिन्थे । र, महिलाहरुलाई यसबाट अलग गर्नका लागि उनले यस्तो गरेका हुन् । किनभने महिलाहरु उनलाई जिस्काउन उनको नक्कल गर्न थालेका थिए ।
साथै कपाडा उत्पादनकर्ताहरुको कयौ रणनीतिहरुका कारण पनि आजकल महिला र पुरुषको कपडामा टाँक अलगअलगतर्फ लगाएको थियो ।
Previousकोइरालाको उत्तराधिकारी खोज्न कांग्रेसमा किचलो
Nextभारतलाई अत्याउदै पाकिस्तानले एफ–१६ लडाकु विमान किन्ने